တစ်ဦး mink အင်္ကျီကိုသိမ်းထားဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
ဟူးရေး! နောက်ဆုံးအနေနဲ့! သငျသညျ, အဆင်းလှပျော့နှင့်အမှန်တကယ်ဇိမ်ခံတစ် mink အင်္ကျီရှိသည်ပါနဲ့! ယခုတွင်သင်သည်အန်တရာယျမရှိဘဲရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလမှရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလကနေစောင့်ရှောက်ဖို့ဘယ်လိုစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။ သို့သော်အမှန်တကယ်, သူတို့ကိုအများကြီး: ခြောက်သွေ့, ပိုးမွှား, အရောင်မီးလောင် ...
တစ်ဦး mink နေသားမွေးအင်္ကျီကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
အပါအဝင်အလွန်ပထမဦးဆုံးသဘာဝအသားမွေး၏သငျ့လျြောသောသိုလှောင်မှုအတွက်အခွအေနေ, mink - သင့်လျော်သောအပူချိန်အခြေအနေများ၏ဖန်တီးမှုဖြစ်ပါတယ်။ ကုတ်အင်္ကျီပူမဖြစ်ပေမယ့်လည်းသူကအေးခဲသင့်ပါတယ် - မရကိုအကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်း။ အဆိုပါအကောင်းဆုံးအပူချိန် 15-17 ဒီဂရီဖြစ်ပြီး, အပြင်, မည်သည့်ကိစ္စတွင်အတွက်ကုတ်အင်္ကျီနွေဦး, နွေရာသီနဲ့ဆောင်းဦးကိုင်ထားလိမ့်မယ်ရှိရာအခန်း၌စိုစွတ်သောမဖြစ်သင့်ပါတယ်။
အစပိုင်းတွင်တစ်ဦး mink အင်္ကျီကိုသိမ်းထားဖို့ဘယ်လောက်၏မေးခွန်းကို, ရာသီရဲ့အဆုံးမှာတင်လိုက်တယ်။ သငျသညျတွန်းလှန်ပိုးရွအေးဂျင့်နှင့်အတူအိတ်တရံများ၏အိတ်ကပ်ထဲမှာထည့်သွင်းရန်, လေခတ်, ဖုန်ကနေသန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးအရာ။ ဒါဟာညာဘက်ကြိုးကွင်းကိုရွေးချယ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်: နေပါစေဘယ်လိုထူးဆန်းတဲ့, မပို, အဘယ်သူမျှအရွယ်အစားအပြုသဘောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုငါမရောက်စေထက်လျော့နည်းခြင်း, အင်္ကျီ၏အသွင်သဏ္ဌာန်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
မည်သည့်ကိစ္စတွင်ကကုတ်အင်္ကျီပေါ်သို့ဖို့မလိုအပ်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သားမွေးအဲဒါကိုရှင်းလင်းသို့မဟုတ်ဖြောင့်ဖို့ကြိုးစားနေ, ရေသညျးမခံပါဘူး။ တစ်သားမွေးအင်္ကျီကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ကိုဘယ်လို - တံခါးပိတ်ပြဿနာ: ခြောက်သွေ့တဲ့။ ထုတ်ကုန်စိုးရိမ်ထိတ်လန်အားလုံးကိုတူညီတဲ့စိုစွတ်သော, မလိုအပ်ရရှိသွားတဲ့လျှင်, ဆံပင်လေမှုတ်စက်ခန်းခြောက်သို့မဟုတ်နီးစပ်ဘက်ထရီကဆွဲထားဖို့ကြိုးစားပါ။ ဒါဟာသဘာဝသူမ၏ခြောက်သွေ့သောအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှကိုအသေးစိတ်နိုင်အောင်ဖြေရှင်းချက်နေရာလွတ်အတွက်အကြိုက်ဆုံးအင်္ကျီကိုအားမရမည်ဖြစ်ကြောင်းပိုပြီးပညာရှိဖြစ်ပါတယ်။
အခြားဖြေရှင်းချက်ရှိပါသည်: အဖိုးတန်သားမွေးအထူးကုအပ်နှံ။ စနစ်တကျတစ် mink အင်္ကျီကိုသိမ်းထားဖို့ဘယ်လောက်ပေါ်သတင်းအချက်အလက်အဘို့, အဲဒီထုတ်ကုန်ရောင်းသောကုမ္ပဏီများသည်ကိုသိကြပါ။ အခြို့သောစတိုးဆိုင်များမှာစဉ်ဆက်မပြတ်အပူချိန်နှင့်စိုထိုင်းဆအဆင့်ကိုထိန်းချုပ်ထားသည်အဘယ်မှာရှိအထူးသိုလှောင်မှုများ အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းတွေ။ ဒီအပျြောအပါးအတော်လေးစျေးကြီးသည်, ဒါပေမယ့်အင်္ကျီကိုသူ့ဟာသူထိုကဲ့သို့သောသဘောထားကိုထိုက်ပါဘူးမလဲ
ကျနော်တို့ကိုလည်းအဖြူ mink အင်္ကျီကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းပြောဆိုသင့်တယ်: ဒီမှာစံစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေလည်းအရောင်များ၏ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ဖို့အထောက်အကူပြုသောသူတို့ကဆက်ပြောသည်နေကြသည်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ထို့နောက်မနှစ်မြို့ဖွယ်အဝါရောင်ဒေသများများ၏အကြောင်းရင်းဖြစ်နိုင်သည့်, ရေမွှေးသို့မဟုတ်အိမ်သာရေရတဲ့၏ကြောက်လန့်ဖြစ်သင့်သည်။ သင်တို့သည်လည်းကော်လာကိုကာကွယ်ရန်နှင့်ပဝါဝတ်ဆင်ထားသင့်ပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ဘယ်လိုတစ်သားမွေးအင်္ကျီကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ - ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုကောက်ကျစ်မဟုတ်ပါဘူး, ကသာအကောင်းဆုံးအခြေအနေများဖန်တီးရန်လိုအပ်ပါသည်။
ရေခဲသေတ္တာ၏အနံ့ဖယ်ရှားပစ်ရန်ကဘယ်လို - ရိုးရာကုစား
တစ်ဦးကလောင်အမည်နှင့်အတူအဝတ်ကိုလျှော်ဖို့ကိုဘယ်လို - အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းများ
တစ်ဦး snowman နှင့်အတူဆွယ်တာအင်္ကျီ
Nelly Furtado လျှို့ဝှက်စွာသူမ၏ခင်ပွန်းထံမှခွဲထွက်
ပျိုးပင်အဘို့အ Box ကို
ဝမ်းဗိုက် syndrome ရောဂါ
Kristen Stewart နဲ့သူ Alicia Kargayl
သငျသညျအဘယ်သူမျှမစိတ်ကူးရှိသည်အရေးပါမှုရာ၏ 20 အကျွမ်းတဝင်စာလုံးများ,
ခြင်္သေ့သည်တက်တူးထိုး - တန်ဖိုးကို
ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင် Hammer နှင့်အယ်လီဇဘတ်ကုန်သည်များမိမိသား၏အမည်ကိုခေါ်
အမျိုးသားဥယျာဉ် Gan HaShlosha အမျိုးသားဥယျာဉ်
မွေးကင်းစကလေးအတွက် Jeep - ဘာလုပ်သနည်း